ခါဘိရပင်လယ်အော် ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
မတူညီတဲ့အရောင်တွေဖြစ်တဲ့ အပြာရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင်တွေက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုပေါင်းစပ်နေသလို စုပုံနေတဲ့ပင်လယ်ကြီးက ကျယ်ပြောလှပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှုခင်း ၁၀၀ ရဲ့ လက်ရွေးစင်နဲ့ ( မီချယ်လင်း . ဂရင်းဂိုက် . ဂျပွန် ) မှာ ကြယ်သုံးပွင့်ရရှိထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ လှပမှုကို ဝင့်ကြွားလျှက်ရှိနေပါတယ်။ အပူပိုင်းငါးနဲ့ သန္တာကျောက်တန်းတွေမြင်နိုင်ပြီး ကြည်လင်လွန်းတဲ့ပင်လယ်ကြီးကို အားရပါးရပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့ မှန်သင်္ဘောစီးကြတာကို လူကြိုက်များပါတယ်။
Okinawa-ken Ishigaki-shi Kabira
မှန်သင်္ဘော ၉း၀၀ မှ ၁၇း၀၀
ကြည်လင်လွန်းပြီးလှပတဲ့ပင်လယ်ဖြစ်ပေမယ့် ခါဘိရပင်လယ်အော်မှာ ရေကူးခြင်းကို တားမြစ်ထားပါတယ်။ မုန်တိုင်းရှောင်ခြင်းနဲ့ ဆောင်းခိုခရီးသွားခြင်းတွေကို ရည်ရွယ်ထားရင် ဆောင်းရာသီမှ နွေဦးအစကို သွားဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကမ်းခြေမှာ ရေကူးနိုင်ပြီး ရေကူးချင်ရင်တော့ နွေရာသီသွားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
Ishigakiလေဆိပ်မှ ၅၀ မိနစ်ခန့် 
ဘတ်စ်ကားဂိတ် သို့ မဟုတ် Ishigakiဂမြို့ တွင်းမှ ခါဘိရရိဇော့တိုလိုင်းမှာ စီးပြီး ( Kabira ) ဆင်း
အီရှိဂခိကျွန်းမှ အမြန်သင်္ဘောဖြင့် ပျမ်းမျှ ၁၀ မိန...
ယာအဲယာမကျွန်းစု အလယ်လောက်မှာ ရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်ဧ...
အိရှိဂခိကျွန်း၏ မြောက်ဘက်အစွန်ဆုံးတွင်ရှိပြီး မီ...